Knowledge Archives - ShwengweGames
သိန်းချီ အကုန်ခံ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ မြန်မာ့ ဆေးနည်းကောင်း
October 24, 2021 by Shwengwe Games
သိန်းချီ အကုန်ခံ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ မြန်မာဆေးနည်းကောင်း
ကျောက်ကပ် ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများမှာ လူလည်းပင်ပန်း၊ငွေကြေးကုန်ကျမှု့ များပြားသော ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သိန်းထောင်ချီ၍ ချမ်းသာသောသူပင် ဒေဝါလီ ခံရသော ရောဂါပါ။
ကျောက်ကပ် ဆေးနေရသူများမှာ လူလည်းနာ ငွေလဲကုန်လှပါသည်။ အချိန်အခိုက်အတန့် တခုသာ ထိန်းထားနိုင်ပြီး
မရဏ မင်းထံ သွားရသည်သာများပါသည်။လဲလှယ်နိုင်မှသာ အသက်ဆက်နိုင်ပါသည်။လဲဖို့စားရိတ်ကလည်း သိန်းထောင်ကျော် ကုန်ကျပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောက်ကပ် ဝေဒနာသည်များ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။ ဖြစ်ခါစတွင်ပျောက် ကင်း၍
နာတာရှည် ခံစားနေရသူ များသက်သာပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများ အ ကြိမ်ရေ လျော့ပါးလာ စေရပါမည်ဟု လုံးဝအာမခံပါသည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က ခံစားခဲ့ဖူးပါသည်။ သိသိခြင်း ဆောင် ရွက်ခဲ့သဖြင့် သုံးလ
အတွင်း ပျောက်ကင်းခဲ့ပါသည်။ စရိတ်သက်သာ အကုန်အကျနည်း၍ လုံးဝအထင် မသေးပါနှင့်။
ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် နံမည်ကြီး နေပြီဖြစ်သည့် HERBAL MEDICINE ကုသနည်းပါ။ အနောက် နိုင်ငံများတွင်ပင် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများပြားလာသည့်
အနောက်တိုင်းဆေးများကို သောက်သုံးရန် ချင့်ချိန်လာကြပြီး သစ်ဥ သစ်ဖု သဘာဝအပင်များမှ ထုတ်ယူသောဆေးများကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲနေပါပြီ
မြန်မာပြည်တွင် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် ထုတ်လုပ်သည့် fame ဆေးတိုက်မှဆေးများ ကမ္ဘာတွင်
နံမည်ရနေပါပြီ။ယခုတင်ပြသောဆေးနည်းမှာ ကျွန်တော်တို့မိသားစု ဘိုး စဉ်ဘောင်ဆက် သုံးစွဲခဲ့သောနည်းပါ။
၁။ ကျောက်ဖရုံသီး ဟင်းချိုကို နေ့စဉ်သောက်ပေးပါ။ (အသား၊ငါး မရောပါနှင့်၊ ရောဂါမရှိသေးသူများ သောက်ပါက
ဆီးကောင်းစေပြီး၊ ယောက်ျားများ အတွက်၊ ယောက်ျားပီသ စေပါသည်)
၂။တရုတ်နံနံပင်ငါးရွက်ကို ရေနွေးဖြူထဲတွင် ထည့်စိမ်ပါ။ လဖက်ခြောက်ခပ်၍ ရေနွေးသောက်သလို သောက်ပါ။
အဖတ်ဝါးစားပါ။ ညနေစာစားပြီး နာရီဝက်ခန့်ခြားပြီးမှသောက်ပါ။အိပ်ချိန်နှင့်ဝေးပါစေ။သွေးတိုးပါကျစေသဖြင့်
၃။ ကျောက်ကပ်ကြောင့် အသည်းအသန်အောင့်နေသူများ ကျောက်ဖရုံသီး ကို ခွဲအူတိုင်ထုတ်ပြီး ကျောက်ကပ်
နေရာသို့ အတွင်းသားဖြင့်ကပ်၍ စည်းထားပါ။ ဖြေးဖြေး သက်သာလာပါမည်။
၄။ရေပူစမ်းနှင့်နီးပါက တပါတ်တစ်ကြိမ်ချိုးပါ၊မနီးပါက ရေနွေးနှင့်ချိုးပြီး ချွေးအောင်းပါ။သုံးလအနည်းဆုံးထားပြီး
ဆောင်ရွက်ပါ။ကျောက်ကပ် ဆေးနေရသူများပင် အကြိမ်ရေ လျော့လာသည်ကို တွေ့ရပါမည်။
လက်ရှိ ညာမောင်း မော်တော်ယာဉ်တွေ အသုံးပြုမှုကို လုံးဝ ပိတ်ပင်တော့မယ့် ကမ္ဘောဒီးယား
ညာမောင်း (Right-Hand Drive) မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေနဲ့ ဇွန် ၂၀၂၂ ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီး ၎င်းတို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်များကို ဘယ်မောင်း (Left-Hand Drive) အဖြစ်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ဉပဒေအရ အသိမ်းခံရပြီး ဖျက်ဆီးခံရမှာဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးများကောင်စီရဲ့ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးများကောင်စီရဲ့ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဖြစ်သူ Hing Thoraxy ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ (၂) ရက်နေ့တုန်းက Minister of Interior Sar Kheng, Minister of National Defence Tea Banh နဲ့ Minister of Economy and Finance Aun Pornmoniroth တို့ထံသို့ စာတစ်စောင်ပို့ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါစာထဲမှာတော့ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ နံပါတ်ပြားများကို အသုံးပြုနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များကို အခွန်ပေးဆောင်ရမယ့် အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
“လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ညာမောင်းမော် တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ သွင်းကုန်ခွန်နဲ့ တင်သွင်းခွန်တွေကို နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်အဖြစ်ပေးဆောင်ရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ညာမောင်းမော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်းဉပဒေတွေနဲ့အညီ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုခွင့်ပြုမှုကိုတော့ ဇွန် ၂၀၂၂ အထိသာ ခွင့်ပြုထားမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ မပြုပြုင်ထားတဲ့ ညာမောင်းမော်တော်ယာဉ်တွေကို ဉပဒေအရ ဖျက်သိမ်းရန် (သို့) ဖျက်ဆီးရန် ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ ညာမောင်းမော်တော်ယာဉ်တွေကို တင်သွင်းနေသည်ကို တွေ့ရှိပါကလည်း ဉပဒေနဲ့အညီ အရေးယူသွားမှာပါ။” – Hing Thoraxy (ဝန်ကြီးများကောင်စီ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်)
Asia Injury Prevention Foundation ရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Kim Pan Ha ကလည်း ယခုလို ညာမောင်းမော် တော်ယာဉ်တွေ ပိတ်ပင်မှုကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ ညာမောင်းတွေဟာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်း ဉပဒေတွေနဲ့ မကိုက်ညီတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းမှာတော့ ကမ္ဘောဒီးယားဟာ ဖိလစ်ပိုင်ပြီးရင်ညာမောင်းမော် တော်ယာဉ် အသုံးပြုမှုကို လုံးဝပိတ်ပင်တော့မယ့် ဒုတိယမြောက် နိုင်ငံဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
October 23, 2021 by Shwengwe Games
တစ်ခါက နပိုလီယံ စစ်ချီတဲ့အခါမှာ ရန်သူတပ်က လမ်းမှာပိတ်ဆို့နေတယ်။ ရပ်သူတပ်ရဲ့ အင်အားကလဲ သူ့ရဲ့ အင်အားထက်များနေတယ်။ရန်သူ့အင်အားက ( ၃၀၀ ) လောက်ရှိတယ် သူတို့က အင်အား ( ၇၀ ) လောက်ပဲရှိတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ရှေ့ကိုတက်ပြီး ရန်သူ့သတင်းရယူတဲ့ ကင်းထောက်တပ်သားက နပိုလီယံကို ” ရှေ့မှာ ရန်သူ့အင်အား ( ၃၀၀ ) လောက်နဲ့ လမ်းကို ပိတ်ဆို့ထားတယ် ” လို့ သတင်းပို့လိုက်တယ်။
အဲဒီအခါမှာ နပိုလီယံက သူရဲ့ တပ်သားတွေဘက်လှည့်ပြီး ” အတော်ပဲဟေ့..သတင်းကောင်းတော့ ရပြီ ရှေ့မှာ ရန်သူ့ရိက္ခာ (၃၀၀) လောက် ရောက်နေပြီတဲ့။ ငါတို့မှာလဲ ရိက္ခာပြတ်နေပြီ။…မင်းတို့ဟာ စစ်တိုက်စွမ်းရည် ကောင်းကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ အရင်ကတည်းက ငါသိခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ ရိက္ခာအတွက် ဘာမှ မပူရတော့ဘူး ဒီကောင်တွေဆီမှာ သွားလုရမယ် ” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဒီလိုချီးကျူးသံကြားလိုက်ရတဲ့ စစ်သားတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားပါသလဲ..သေချာတာပေါ့ ချက်ချင်းစိတ်ဓာတ်တက်ကြွသွားပြီး ကိုယ့်ထက်အင်အား ၄ဆကျော်ကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေကို အစွမ်းကုန်တိုက်ပြီး အောင်ပွဲကိုယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရိက္ခာတွေကိုလည်း သိမ်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့။နပိုလီယံရဲ့ စကားထဲက မင်းတို့စစ်တိုက်စွမ်းရည်ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့စကားဟာ သူ့တပ်သားတွေ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ချီးကျူးလိုက်တာပါ။
ဒါဟာ သူရဲ့စွမ်းရည်ထဲက တစ်ခုပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း နပိုလီယံရယ်လို့ နာမည်ကျော်ခဲ့တာပေါ့။ဒါကြောင့် အောင် မြင်မှုရချင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ချီးကျူးခြင်း အတတ်ဟာလည်း မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ အ ရည်အသွေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
Credit – သုတဇုန်
တစ္ခါက နပိုလီယံ စစ္ခ်ီတဲ့အခါမွာ ရန္သူတပ္က လမ္းမွာပိတ္ဆို႔ေနတယ္။ ရပ္သူတပ္ရဲ႕ အင္အားကလဲ သူ႕ရဲ႕ အင္အားထက္မ်ားေနတယ္။ရန္သူ႕အင္အားက ( ၃၀၀ ) ေလာက္႐ွိတယ္ သူတို႔က အင္အား ( ၇၀ ) ေလာက္ပဲ႐ွိတယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေ႐ွ႕ကိုတက္ၿပီး ရန္သူ႕သတင္းရယူတဲ့ ကင္းေထာက္တပ္သားက နပိုလီယံကို ” ေ႐ွ႕မွာ ရန္သူ႕အင္အား ( ၃၀၀ ) ေလာက္နဲ႔ လမ္းကို ပိတ္ဆို႔ထားတယ္ ” လို႔ သတင္းပို႔လိုက္တယ္။
အဲဒီအခါမွာ နပိုလီယံက သူရဲ႕ တပ္သားေတြဘက္လွည့္ၿပီး ” အေတာ္ပဲေဟ့..သတင္းေကာင္းေတာ့ ရၿပီ ေ႐ွ႕မွာ ရန္သူ႕ရိကၡာ (၃၀၀) ေလာက္ ေရာက္ေနၿပီတဲ့။ ငါတို႔မွာလဲ ရိကၡာျပတ္ေနၿပီ။…မင္းတို႔ဟာ စစ္တိုက္စြမ္းရည္ ေကာင္းၾကတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ အရင္ကတည္းက ငါသိခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ ရိကၡာအတြက္ ဘာမွ မပူရေတာ့ဘူး ဒီေကာင္ေတြဆီမွာ သြားလုရမယ္ ” လို႔ ေျပာလိုက္တယ္ ။
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒီလိုခ်ီးက်ဴးသံၾကားလိုက္ရတဲ့ စစ္သားေတြဘယ္လိုျဖစ္သြားပါသလဲ..ေသခ်ာတာေပါ့ ခ်က္ခ်င္းစိတ္ဓာတ္တက္ႂကြသြားၿပီး ကိုယ့္ထက္အင္အား ၄ဆေက်ာ္ႀကီးမားတဲ့ရန္သူေတြကို အစြမ္းကုန္တိုက္ၿပီး ေအာင္ပြဲကိုယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရိကၡာေတြကိုလည္း သိမ္းႏိုင္ခဲ့တာေပါ့။နပိုလီယံရဲ႕ စကားထဲက မင္းတို႔စစ္တိုက္စြမ္းရည္ေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့စကားဟာ သူ႕တပ္သားေတြ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ခ်ီးက်ဴးလိုက္တာပါ။
ဒါဟာ သူရဲ႕စြမ္းရည္ထဲက တစ္ခုေပါ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း နပိုလီယံရယ္လို႔ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တာေပါ့။ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ ျမင္မႈရခ်င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို ခ်ီးက်ဴးျခင္း အတတ္ဟာလည္း မျဖစ္မေနလိုအပ္တဲ့ အ ရည္အေသြးတစ္ခုပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
Credit – သုတဇုန္
ကင်းမြီးကောက် ကင်းခြေများ မတော်တစ်ဆအကိုက်ခံရပါက အမြန်ဆုံး နှင့် အလွယ်ကူဆုံး အဆိပ်ဖြေနည်း
October 24, 2021 October 23, 2021 by Shwengwe Games
ကင်းခြေများ မတော်တဆ ကိုက်ခံရပါက
၁။သင်္ဘောသီးအစိမ်း အခွံမှ အစေးကို ကိုက်ခံရသော နေရာတွင်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အဆိပ်ချက်ချင်း ပြေနိုင် ပါတယ်။
၂။ ကင်းမြှီးကောက်ကိုက်ခံ ရပါက –သံပုရာသီး အရည်နှင့် အချိုမှုန့်သမအောင် ရောစပ်၍ရသော အရည်ဖြင့် ကိုက်ခံရသောနေရာအား လိမ်းပေးပါက၁၀ မိနစ် အတွင်း အဆိပ်ပြေ နိုင်သည်။
၃။ ကြက်သွန်နီ၃ လုံးကိုမီးဖုတ်ပါ –မီးဖုတ်ပြီးသော ကြက်သွန်နီကို ထောင်း၍ အရည် ညစ်ယူပါ။ကြက်သွန် မီးဖုတ် အရည်ကို အကိုက်ခံရသည့်နေရာကို လိမ်းပေးပြီးအဖတ်များ ကိုလည်း အနာပေါ်ကိုအုံ၍အဝတ်ဖြင့်စည်းထားပါ။အဆိပ်ပြေ လိမ့်မည်။
၄။ မန်ကျည်းသီး အစေ့ကိုသွေး၍ အရည်ကို အနာပေါ် လိမ်းပေးပါ။အဆိပ်ပြေပါလိမ့်မည်။(ကင်းမြီးကောက်ကို အလွယ် တကူသိမြင်နိုင်သော်လည်းအချို့မှာကင်းခြေများနှင့် ရထားကောင်တို့ကို ဆင်တူနေသဖြင့် မှားယွင်းတတ်ကြပါသည်…သိသူများကတော့ အလွယ်တကူခွဲခြား နိုင်သော်လည်းမသိသူများ မှတ်သားရန်မှာ…လူကိုအန္တရာယ် မပေးတတ်သောရထားကောင်မှာနှေးကွေးလေးလံစွာသွာသွားသည့်အကောင်မျိုးဖြစ်၍ ကင်းခြေများမှာတော့သင် ဖမ်းမမီအောင် အသွားမြန်သည့် သတ္တဝါမျိုးဖြစ်ပါသည်။
ရထားကောင်က ခန္ဓာကိုယ် လုံးပြီး၊ကင်း ခြေများကတော့ပြားသော ခန္ဓာကိုယ်ရှိပါသည်။ကင်းခြေများနှင့် ကင်းမြီးကောက်ကတော့ အဆိပ်ရှိသတ္တဝါဖြစ်ပြီး မလွဲမရှောင်သာတိုးမိ၍ သော်လည်းကောင်း တက်နင်းမိ၍သော်လည်းကောင်း အကိုက်ခံရပါကအဆိပ်တက်နိုင်ပါသဖြင့်ထိုသတ္တဝါများကို ခွဲခြားသိမြင် ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ…)
Credit: PA O PAY
မနက်ဆို သစ်ပင်၊ ညဖက်ဆို ဘီလူးဖြစ်တဲ့ သစ်ဘီလူးအပင်ကို စိုက်မိသူ တယောက်အကြောင်း
တောရွာလေးတစ်ရွာ တွင်ဖြစ်၏။ မှောင်မှောင်မဲမဲနှင့်တိတ်ဆိတ်နေလေသည် ။ ထိုအချိန်တွင် စွဲငင်စွာအူလိုက်သော ခွေးအူသံသည် တိတ်ဆိတ်နေသော ညအချိန်ကိုဖောက်ခွဲလိုက်လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရွာတောင်ပိုင်းမှအော်သံနှင့်အတူ လူအများမီးဒုတ်များ လက်နက်များကိုစွဲကိုင်ကာ သူကြီးအိမ်ရှေ့သို့ရောက်လာကြသည်။ “ သူကြီး သူကြီး မောင်ထုပါအုံး ထစမ်းပါအုံးဟ “ လူအများ၏အော်ဟစ်သံကြောင့်သူကြီးသည် မောင်းကို တစ်ဒူဒူနှင့်စတင်တီးခတ်လိုက်သည်။
ထိုအခါ ရွာတစ်လုံးမှ လူများသည် ဓားလှံလက်နက်များကိုစွဲကိုင်ကာ သူကြီးအိမ်သို့အပြေးအလွှားရောက်ရှိလာကြပါသည်။ သူကြီးလည်းအိမ်ထဲမှထွက်လာပြီး “တောင်ပိုင်းက ဘာဖြစ်လို့လဲကွပြောစမ်းပါအုံးဟ” ထိုအခါ ပွကြီးဆိုသောရွာသားမှ” ကျုပ်တို့အိမ်နားမှာ ခြေသံကြားလို့ ထိကြည့်လိုက်တော့မဲမဲကောင်ကြီးတစ်ကောင် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ သရဲလား တစ္တေလားမသိဘူး အဲဒါကြောင့်ဓားဆွဲပြီးလိုက်လာတာဟုပြောသံအဆုံး တစ်ရွာလုံး လှုပ်ရှာသွားကြသည်။
ထိုအခါ သူကြီးက “ကဲဘာကောင်လဲဆိုတာအတိအကျတော့မသိဘူး အဲတော့ဘုန်းကြီးပင့်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းတရားလေး ဘာလေး ရွတ်ကြတာပေါ့ကွာ” ဟုပြောကာ မနက်လင်းသောအခါ ရွာကလေးမှ တရားစာရွတ်သံများ အိမ်တိုင်လိုလိုကြား လာ ကြရပါသည်။တဲအိမ်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာတော့ “ကဲအရီးလေး သမီးပြန်မယ်နော် ကျန်းမာရေးသေချာဂရုစိုက်” “ကျေးဇူးတင် လိုက်တာ ဆရာမလေးရယ် ဆေးဖိုးဝါးခမပေးနိုင်ပေမဲ့ အလကားကုပေးတဲ့ ဆရာမလေး ကျေးဇူးကို ဘယ်လိုဆပ်ရမလဲ မသိ ပါဘူး ဆရာမလေးရယ်” “ အရီးလေးကလည်း ဆေးဖိုးဝါးခပြောစရာမလိုပါဘူး ဒီရွာလေးက ကျွန်မအိမ်လိုဖြစ်နေ ပါပြီ” ဟုပြောကာ လှပသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် အိမ်ကလေးထဲမှထွက်ခွာသွားလေသည်။
ဆရာမလေးက တနယ်တကျေးမှလာ၍ထိုရွာလေးတွင်နေသော ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမှ သူနာပြုဆရာမလေး မမြခက် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာမလေးသည် ရုပ်ရည်ချောမောလှပကာ မိန်းကလေးပီသစွာ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးနှင့် ကျက်သရေရှိသူ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့ ဆရာမလေးတစ်ယောက် တစ်ဖက်ရွာမှနေ၍ဆေးကုပြီးအပြန် “ ဆရာမ ဆရာမ “ “ အော် ဦးလှအောင်ပဲ နေမကောင်းလို့လား မသိဘူး “ “ မဟုတ်ပါဘူးဆရာမလေးရယ် ဆရာမလေးအတွက် ပန်းပင်ပေါက်လေး တွေ လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါ “ “ကျေးဇူးပါပဲ ဦးလှအောင် ရယ် အိမ်လေးကလည်း နည်းနည်းခြောက်ကပ်နေတော့ စိမ်းစိမ်းစိုစိုလေးဖြစ်ချင်တာပေါ့” “ ဆရာမလေးရယ် စိမ်းစိမ်းစိုစိုဖြစ်ချင်တာများ ဆရာလေး မောင်စောနိုင်နဲ့ လက်ထပ် လိုက်ပေါ့ဗျာ”ဆရာမလေးသည် ရယ်မောရင်း တစ်နေ့နေ့ပေါ့ရှင်ဟု ပြောကာ ပျိုးပင်ပေါက်များကိုယူကာ ထွက်ခါသွားလေသည်။
ဆရာလေးမောင်စောနိုင်သည် ကျောင်းဆရာတစ်ဦးဖြစ်ကာ ဆရာမလေးနှင့်ရေငံနေသူဖြစ်ပါသည် ။ ထိုပျိုးပင်ပေါက်များကို ဆရာမလေးသည် အိမ်ခေါင်းရင်းဘက်တွင်သေချာစိုက်ပျိုးလေသည်။ ထိုသစ်ပင်ပေါက်များထဲတွင် အခက်အလက်သိပ်မရှိ မုလာဥကဲ့သို့အရွက်များရှိ၍ပြောင်ချောချောအနေအထားရှိသော အပင်တစ်ပင်ပါလာသည်ကိုတော့ဆရာမလေး သတိပြုမိလိုက်ပါသည်။ ထိုအပင်သည် သစ်မခုတ်ရ ကျမ်းအလိုအရ အောက်ပိုင်းရှုူး၍ အပေါ်ပိုင်းကြီးသော သစ်ဘီလူးပင် ဆို သည်သာ ဆရာမလေးသိခဲ့ရင်…။
အချိန်တွေကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆရာမလေးတို့လဲလက်ထပ်ပြီးပြီး အပင်ကြီးကလည်းပိုပိုကြီးလာလေသည်။ ထိုအပင်သည် ဆရာမလေးအတွက် ကံကြမ္မာဆိုးတွေသယ်ဆောင်လာမည်ဆိုသည်ကိုသာ သိခဲ့ရင် ညနေခင်း ရေခပ်ဆင်းချိန် ပျိုးနုတ် ကောက်စိုက် စပါးရိတ်စသည့်စုပေါင်းအဖွဲများကြုံလျှင်လည်း ထိုအကြောင်းမပါမပြီးပေ “ဟဲ့ကောင်မ ဟိုနေ့က တောင်ပိုင်းက ကိုကျော်ရသားလေး မဲမဲအကောင်ကြီးကိုမြင်ပြီး မေ့သွားသာ အခုထိသတိ မရသေးဘူးတဲ့” ပြီးတောံ့နောက်တစ်ခုက “အဲကောင်ကြီး ကဆရာမလေးတို့အိမ်နားမှာပဲေ ပျာက်သွားတာတဲ့ ဆရာမလေး သရဲမွေးထားလားမသိပါဘူးအေ ဆရာမလေးက စုန်းပညာတတ်တယ်လို့လဲ ပြောကြတယ် ငါတော့ မယုံပါဘူးအေ “ ဟုပြောဆိုနေကြသည်။
ထိုမကောင်းဆိုးဝါးအမည်ရသောသတ္တဝါကြီးမှာ တစ်ပတ်ခြားတစ်ခါ နှစ်ပတ်ခြားတစ်ခါတွေ့နေရသောကြောင့်ရွာလေးမှာ တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေကြရသည်။ သူတို့ထိုအကောင်ကြီးနောက်ကိုလိုက်တိုင်း ထိုအကောင်ကြီးသည် ဆရာမလေးတို့ အိမ်နားမှာ ပျောက်ဆုံးသွားလေသည်။ တစ်ည “ အမလေးကယ်ကြပါအုံးသရဲသရဲ” ဟူသောအသံနှင့် တစ်ရွာလုံး ဆူညံ ပွက်လောရိုက်သွားပါသည် ။ ထိုအခါကင်းသမားများက လိုက်ကြရင်း ခဲများဒုတ်များနှင့်ပစ်ပေါက်ကြလေသည်။ ထိုအကောင်ကြီးသည် ဆရာမလေး ခြံနားအရောက်ပျောက်ဆုံးသွားလေသည်။ ထိုအခါ”ဆရာမလေးထပါအုံး ထပါအုံး “ ဟုနှိုးကာ ဝင်ရောက်ရှာဖွေသော်လည်းမတွေ့ရှိကြပေ။
သို့သော်လည်း စိုက်ပျိုးထားသောအပင်ကြီးမှာ သွေးများပမာ အရည်များ ထွက်ကျနေသောဒဏ်ရာကြီးအား မည်သူမျှသတိမထားမိကြပေ။ထိုအခါတစ်ရွာလုံးကလည်း ဆရာမလေးစုန်းမဆိုတာ ပိုယုံကြည်အောင် ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဆရာမလေးကို စုန်းမဟု စွတ်စွဲပြီး အိမ်ရှေ့တွင် လာရောက်ဆဲဆိုကာ ရန်ရှာနေသော ရွာသားနှစ်ယောက်လုံး နောက်နေ့တွင် သစ်ပင်ေ ပါ်မှ လိမ့်ကျကာ ဇက်ကျိုး၍သေလေသည်။ ထိုအခါတစ်ရွာလုံးမှသေချာပေါက်အတွေးများပိုမိုခိုင်မာလာသည် ။ ဆရာမလေးတို့ လင်မယားသည် တစ်ညတွင် “ မိန်းမကိုယ်တို့အိမ်ပြောင်းရအောင်ကွာ ဒီရွာမှာဆက်နေရင် အန္တရာယ် များတယ် မင်းဗိုက်ထဲကကလေးကိုလည်း ထည့်တွက်ရအုံးမယ်လေ” ဟု ဆရာလေး ကိုစောနိုင်ကပြောကာ ကဲကိုယ်တို့ နောက်ညဆို တိတ်တိတ်လေး ပြောင်းရွေ့ကြမယ်နော်ဟု စီစဉ်ထားခဲ့လေသည်။
လရောင်မထွက်တဲ့ထိုနေ့ညတွင် “ လိုက်ကြလိုက်ကြ” ဟူသောအသံများနှင့် “ ဟိုစုန်းမလင်မယား ငါတို့ရွာကိုဖျက်စီးပြီး အခုထွက်ပြေးတော့မယ် လိုက်ကြလိုက်ကြ” ဟူသောအသံများနှင့်ဆရာမလေးတို့လင်မယားနောက်ကိုလိုက်ကြ လေသည်။ ဆရာမလေးကမိန်းမသားမို့ ကလေးလည်းလွယ်ထားရသောအခါ ခဏလေးနှင့်မိလေသည်။ “ ကျွန်မတို့စုန်းမ မဟုတ်ကြပါဘူးရှင် မသတ်ပါနဲ့ “ဟုတောင်းပန်သော်လည်း ခေတ်ပညာအမြင်မရှိသော ရွာသားများသည် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်လိုက်ကြလေသည်။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ရွာအပြင်ရောက်နေသောအခါ အိမ်တွင်ကလေးများနှင့် အဖိုးအဖွားများသာကျန်ရစ်လေသည်။
ထိုအချိန်တွင် မဲမဲကောင်ကြီးသည် မှောင်ထဲမှနေ၍ ကလေးများအား ခြောက်လှန့်လေရာ ကလေးများလည်းကြောက်လန့်ပြီးပြေးမိပြေးရာေြ့ပးကြသောအခါ မီးခွက်များကိုခလုပ်တိုက်မိပြီး တစ်အိမ်လုံးမီးစွဲလောင်လေသည်။ထိုအခါသက်ကယ်များ ဓနိများနှင့်မိုးထားသောအိမ်များကို ဆက်တိုက် စွဲလောင်လေသည် ထိုအခါ ရွာအပြင် ပြန်ရောက်နေသော ရွာသားများသည် ရွာထဲသို့အမှီပြန်လာကြသော်လည်း မီးလောင်တိုက်သွင်းသကဲ့သို့ ကလေးများ အကုန်သေကြေကုန်ကြလေသည်။ သို့သော်လည်း ဆရာမလေးတို့တစ်အိမ်သာ မိးမလောင်ဘဲကျန်ရစ်လေသည်။ ရွာသားများလည်းအရုးတစ်ပိုင်းဖြစ်ကြရှာသည်။
မနက်လင်းသောအခါ ရွာဦးကျော်င်းဆရာတောင်ကြွချီလာပြီး ဆရာမလေး တို့ အိမ်ဝင်းကိုလှည့်ကြည့်ပြီး သစ်ပင်ကြီးရှေ့ရောက်သောအခါ “ဒကာတို့ဒီသစ်ပင်ဟာ သစ်ဘီလူးပင်ဖြစ်တယ် ဘီလူးစောင့်ပြီးညအချိန်ဆိုအပြင်ထွက်လေ့ရှိတယ် သူ့ကိုမွေးမြူစောင့်ရှောက်ထားတဲ့သခင်ကိုအမြဲစောင့်ရှောက်တယ် သူ့သခင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ရင် သူက ကလက်စားချေတတ်တယ်ဒကာတို့ဟု”မိန့်လေရာ တစ်ရွာလုံးလဲ အမှားကိုသိပြီး ဆရာမလေးတို့လင်မယားအား မြေမြှပ်ပေးကာ ထိုရွာလေးမှာရွာလုံးကျွတ်ပြောင်းရွေ့ခဲ့လေသည်။ သစ်ဘီလူးပင်ကြီးကတော့တစ်ထီးတည်းကျန်ရစ်ခဲ့လေတော့သည်။
Credit – Kaung khant Zaw
ေတာ႐ြာေလးတစ္႐ြာ တြင္ျဖစ္၏။ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲႏွင့္တိတ္ဆိတ္ေနေလသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စြဲငင္စြာအူလိုက္ေသာ ေခြးအူသံသည္ တိတ္ဆိတ္ေနေသာ ညအခ်ိန္ကိုေဖာက္ခြဲလိုက္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႐ြာေတာင္ပိုင္းမွေအာ္သံႏွင့္အတူ လူအမ်ားမီးဒုတ္မ်ား လက္နက္မ်ားကိုစြဲကိုင္ကာ သူႀကီးအိမ္ေ႐ွ႕သို႔ေရာက္လာၾကသည္။ “ သူႀကီး သူႀကီး ေမာင္ထုပါအုံး ထစမ္းပါအုံးဟ “ လူအမ်ား၏ေအာ္ဟစ္သံေၾကာင့္သူႀကီးသည္ ေမာင္းကို တစ္ဒူဒူႏွင့္စတင္တီးခတ္လိုက္သည္။
ထိုအခါ ႐ြာတစ္လုံးမွ လူမ်ားသည္ ဓားလွံလက္နက္မ်ားကိုစြဲကိုင္ကာ သူႀကီးအိမ္သို႔အေျပးအလႊားေရာက္႐ွိလာၾကပါသည္။ သူႀကီးလည္းအိမ္ထဲမွထြက္လာၿပီး “ေတာင္ပိုင္းက ဘာျဖစ္လို႔လဲကြေျပာစမ္းပါအုံးဟ” ထိုအခါ ပြႀကီးဆိုေသာ႐ြာသားမွ” က်ဳပ္တို႔အိမ္နားမွာ ေျခသံၾကားလို႔ ထိၾကည့္လိုက္ေတာ့မဲမဲေကာင္ႀကီးတစ္ေကာင္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းနဲ႔ သရဲလား တေစၲလားမသိဘူး အဲဒါေၾကာင့္ဓားဆြဲၿပီးလိုက္လာတာဟုေျပာသံအဆုံး တစ္႐ြာလုံး လႈပ္႐ွာသြားၾကသည္။
ထိုအခါ သူႀကီးက “ကဲဘာေကာင္လဲဆိုတာအတိအက်ေတာ့မသိဘူး အဲေတာ့ဘုန္းႀကီးပင့္ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္းတရားေလး ဘာေလး ႐ြတ္ၾကတာေပါ့ကြာ” ဟုေျပာကာ မနက္လင္းေသာအခါ ႐ြာကေလးမွ တရားစာ႐ြတ္သံမ်ား အိမ္တိုင္လိုလိုၾကား လာ ၾကရပါသည္။တဲအိမ္ေလးတစ္ခုအတြင္းမွာေတာ့ “ကဲအရီးေလး သမီးျပန္မယ္ေနာ္ က်န္းမာေရးေသခ်ာဂ႐ုစိုက္” “ေက်းဇူးတင္ လိုက္တာ ဆရာမေလးရယ္ ေဆးဖိုးဝါးခမေပးႏိုင္ေပမဲ့ အလကားကုေပးတဲ့ ဆရာမေလး ေက်းဇူးကို ဘယ္လိုဆပ္ရမလဲ မသိ ပါဘူး ဆရာမေလးရယ္” “ အရီးေလးကလည္း ေဆးဖိုးဝါးခေျပာစရာမလိုပါဘူး ဒီ႐ြာေလးက ကြၽန္မအိမ္လိုျဖစ္ေန ပါၿပီ” ဟုေျပာကာ လွပေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ အိမ္ကေလးထဲမွထြက္ခြာသြားေလသည္။
ဆရာမေလးက တနယ္တေက်းမွလာ၍ထို႐ြာေလးတြင္ေနေသာ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမွ သူနာျပဳဆရာမေလး မျမခက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမေလးသည္ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပကာ မိန္းကေလးပီသစြာ ႐ိုး႐ိုးယဥ္ယဥ္ေလးႏွင့္ က်က္သေရ႐ွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔ ဆရာမေလးတစ္ေယာက္ တစ္ဖက္႐ြာမွေန၍ေဆးကုၿပီးအျပန္ “ ဆရာမ ဆရာမ “ “ ေအာ္ ဦးလွေအာင္ပဲ ေနမေကာင္းလို႔လား မသိဘူး “ “ မဟုတ္ပါဘူးဆရာမေလးရယ္ ဆရာမေလးအတြက္ ပန္းပင္ေပါက္ေလး ေတြ လက္ေဆာင္ေပးခ်င္လို႔ပါ “ “ေက်းဇူးပါပဲ ဦးလွေအာင္ ရယ္ အိမ္ေလးကလည္း နည္းနည္းေျခာက္ကပ္ေနေတာ့ စိမ္းစိမ္းစိုစိုေလးျဖစ္ခ်င္တာေပါ့” “ ဆရာမေလးရယ္ စိမ္းစိမ္းစိုစိုျဖစ္ခ်င္တာမ်ား ဆရာေလး ေမာင္ေစာႏိုင္နဲ႔ လက္ထပ္ လိုက္ေပါ့ဗ်ာ”ဆရာမေလးသည္ ရယ္ေမာရင္း တစ္ေန႔ေန႔ေပါ့႐ွင္ဟု ေျပာကာ ပ်ိဳးပင္ေပါက္မ်ားကိုယူကာ ထြက္ခါသြားေလသည္။
ဆရာေလးေမာင္ေစာႏိုင္သည္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ကာ ဆရာမေလးႏွင့္ေရငံေနသူျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုပ်ိဳးပင္ေပါက္မ်ားကို ဆရာမေလးသည္ အိမ္ေခါင္းရင္းဘက္တြင္ေသခ်ာစိုက္ပ်ိဳးေလသည္။ ထိုသစ္ပင္ေပါက္မ်ားထဲတြင္ အခက္အလက္သိပ္မ႐ွိ မုလာဥကဲ့သို႔အ႐ြက္မ်ား႐ွိ၍ေျပာင္ေခ်ာေခ်ာအေနအထား႐ွိေသာ အပင္တစ္ပင္ပါလာသည္ကိုေတာ့ဆရာမေလး သတိျပဳမိလိုက္ပါသည္။ ထိုအပင္သည္ သစ္မခုတ္ရ က်မ္းအလိုအရ ေအာက္ပိုင္း႐ႈူး၍ အေပၚပိုင္းႀကီးေသာ သစ္ဘီလူးပင္ ဆို သည္သာ ဆရာမေလးသိခဲ့ရင္…။
အခ်ိန္ေတြၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဆရာမေလးတို႔လဲလက္ထပ္ၿပီးၿပီး အပင္ႀကီးကလည္းပိုပိုႀကီးလာေလသည္။ ထိုအပင္သည္ ဆရာမေလးအတြက္ ကံၾကမၼာဆိုးေတြသယ္ေဆာင္လာမည္ဆိုသည္ကိုသာ သိခဲ့ရင္ ညေနခင္း ေရခပ္ဆင္းခ်ိန္ ပ်ိဳးႏုတ္ ေကာက္စိုက္ စပါးရိတ္စသည့္စုေပါင္းအဖြဲမ်ားၾကဳံလွ်င္လည္း ထိုအေၾကာင္းမပါမၿပီးေပ “ဟဲ့ေကာင္မ ဟိုေန႔က ေတာင္ပိုင္းက ကိုေက်ာ္ရသားေလး မဲမဲအေကာင္ႀကီးကိုျမင္ၿပီး ေမ့သြားသာ အခုထိသတိ မရေသးဘူးတဲ့” ၿပီးေတာံ႕ေနာက္တစ္ခုက “အဲေကာင္ႀကီး ကဆရာမေလးတို႔အိမ္နားမွာပဲေ ပ်ာက္သြားတာတဲ့ ဆရာမေလး သရဲေမြးထားလားမသိပါဘူးေအ ဆရာမေလးက စုန္းပညာတတ္တယ္လို႔လဲ ေျပာၾကတယ္ ငါေတာ့ မယုံပါဘူးေအ “ ဟုေျပာဆိုေနၾကသည္။
ထိုမေကာင္းဆိုးဝါးအမည္ရေသာသတၱဝါႀကီးမွာ တစ္ပတ္ျခားတစ္ခါ ႏွစ္ပတ္ျခားတစ္ခါေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္႐ြာေလးမွာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေနၾကရသည္။ သူတို႔ထိုအေကာင္ႀကီးေနာက္ကိုလိုက္တိုင္း ထိုအေကာင္ႀကီးသည္ ဆရာမေလးတို႔ အိမ္နားမွာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေလသည္။ တစ္ည “ အမေလးကယ္ၾကပါအုံးသရဲသရဲ” ဟူေသာအသံႏွင့္ တစ္႐ြာလုံး ဆူညံ ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားပါသည္ ။ ထိုအခါကင္းသမားမ်ားက လိုက္ၾကရင္း ခဲမ်ားဒုတ္မ်ားႏွင့္ပစ္ေပါက္ၾကေလသည္။ ထိုအေကာင္ႀကီးသည္ ဆရာမေလး ျခံနားအေရာက္ေပ်ာက္ဆုံးသြားေလသည္။ ထိုအခါ”ဆရာမေလးထပါအုံး ထပါအုံး “ ဟုႏိႈးကာ ဝင္ေရာက္႐ွာေဖြေသာ္လည္းမေတြ႕႐ွိၾကေပ။
သို႔ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးထားေသာအပင္ႀကီးမွာ ေသြးမ်ားပမာ အရည္မ်ား ထြက္က်ေနေသာဒဏ္ရာႀကီးအား မည္သူမွ်သတိမထားမိၾကေပ။ထိုအခါတစ္႐ြာလုံးကလည္း ဆရာမေလးစုန္းမဆိုတာ ပိုယုံၾကည္ေအာင္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆရာမေလးကို စုန္းမဟု စြတ္စြဲၿပီး အိမ္ေ႐ွ႕တြင္ လာေရာက္ဆဲဆိုကာ ရန္႐ွာေနေသာ ႐ြာသားႏွစ္ေယာက္လုံး ေနာက္ေန႔တြင္ သစ္ပေင္ ပၚမွ လိမ့္က်ကာ ဇက္က်ိဳး၍ေသေလသည္။ ထိုအခါတစ္႐ြာလုံးမွေသခ်ာေပါက္အေတြးမ်ားပိုမိုခိုင္မာလာသည္ ။ ဆရာမေလးတို႔ လင္မယားသည္ တစ္ညတြင္ “ မိန္းမကိုယ္တို႔အိမ္ေျပာင္းရေအာင္ကြာ ဒီ႐ြာမွာဆက္ေနရင္ အႏၲရာယ္ မ်ားတယ္ မင္းဗိုက္ထဲကကေလးကိုလည္း ထည့္တြက္ရအုံးမယ္ေလ” ဟု ဆရာေလး ကိုေစာႏိုင္ကေျပာကာ ကဲကိုယ္တို႔ ေနာက္ညဆို တိတ္တိတ္ေလး ေျပာင္းေ႐ြ႕ၾကမယ္ေနာ္ဟု စီစဥ္ထားခဲ့ေလသည္။
လေရာင္မထြက္တဲ့ထိုေန႔ညတြင္ “ လိုက္ၾကလိုက္ၾက” ဟူေသာအသံမ်ားႏွင့္ “ ဟိုစုန္းမလင္မယား ငါတို႔႐ြာကိုဖ်က္စီးၿပီး အခုထြက္ေျပးေတာ့မယ္ လိုက္ၾကလိုက္ၾက” ဟူေသာအသံမ်ားႏွင့္ဆရာမေလးတို႔လင္မယားေနာက္ကိုလိုက္ၾက ေလသည္။ ဆရာမေလးကမိန္းမသားမို႔ ကေလးလည္းလြယ္ထားရေသာအခါ ခဏေလးႏွင့္မိေလသည္။ “ ကြၽန္မတို႔စုန္းမ မဟုတ္ၾကပါဘူး႐ွင္ မသတ္ပါနဲ႔ “ဟုေတာင္းပန္ေသာ္လည္း ေခတ္ပညာအျမင္မ႐ွိေသာ ႐ြာသားမ်ားသည္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ပစ္လိုက္ၾကေလသည္။ တစ္႐ြာလုံးနီးပါး ႐ြာအျပင္ေရာက္ေနေသာအခါ အိမ္တြင္ကေလးမ်ားႏွင့္ အဖိုးအဖြားမ်ားသာက်န္ရစ္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မဲမဲေကာင္ႀကီးသည္ ေမွာင္ထဲမွေန၍ ကေလးမ်ားအား ေျခာက္လွန္႔ေလရာ ကေလးမ်ားလည္းေၾကာက္လန္႔ၿပီးေျပးမိေျပးရာေျ႕ပးၾကေသာအခါ မီးခြက္မ်ားကိုခလုပ္တိုက္မိၿပီး တစ္အိမ္လုံးမီးစြဲေလာင္ေလသည္။
ထိုအခါသက္ကယ္မ်ား ဓနိမ်ားႏွင့္မိုးထားေသာအိမ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ စြဲေလာင္ေလသည္ ထိုအခါ ႐ြာအျပင္ ျပန္ေရာက္ေနေသာ ႐ြာသားမ်ားသည္ ႐ြာထဲသို႔အမွီျပန္လာၾကေသာ္လည္း မီးေလာင္တိုက္သြင္းသကဲ့သို႔ ကေလးမ်ား အကုန္ေသေၾကကုန္ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာမေလးတို႔တစ္အိမ္သာ မိးမေလာင္ဘဲက်န္ရစ္ေလသည္။ ႐ြာသားမ်ားလည္းအ႐ုးတစ္ပိုင္းျဖစ္ၾက႐ွာသည္။
မနက္လင္းေသာအခါ ႐ြာဦးေက်ာ္င္းဆရာေတာင္ႂကြခ်ီလာၿပီး ဆရာမေလး တို႔ အိမ္ဝင္းကိုလွည့္ၾကည့္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးေ႐ွ႕ေရာက္ေသာအခါ “ဒကာတို႔ဒီသစ္ပင္ဟာ သစ္ဘီလူးပင္ျဖစ္တယ္ ဘီလူးေစာင့္ၿပီးညအခ်ိန္ဆိုအျပင္ထြက္ေလ့႐ွိတယ္ သူ႕ကိုေမြးျမဴေစာင့္ေ႐ွာက္ထားတဲ့သခင္ကိုအၿမဲေစာင့္ေ႐ွာက္တယ္ သူ႕သခင္ကိုစိတ္ဆင္းရဲေအာင္လုပ္ရင္ သူက ကလက္စားေခ်တတ္တယ္ဒကာတို႔ဟု”မိန္႔ေလရာ တစ္႐ြာလုံးလဲ အမွားကိုသိၿပီး ဆရာမေလးတို႔လင္မယားအား ေျမျမႇပ္ေပးကာ ထို႐ြာေလးမွာ႐ြာလုံးကြၽတ္ေျပာင္းေ႐ြ႕ခဲ့ေလသည္။ သစ္ဘီလူးပင္ႀကီးကေတာ့တစ္ထီးတည္းက်န္ရစ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။
တစ်ခါတုန်းက ကြက်မတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။ ကြက်မက အနီရောင်အဆင်းရှိတဲ့ကြက်မဖြစ်ပြီး ကြက်ကလေးငါးကောင်လည်း မွေးထားပါတယ်။ သူမမှာ ဘဲ ၊ ကြောင်နဲ့ ခွေးတစ်ကောင် စတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်။တစ်နေ့မှာတော့ ကြက်မက ဂျုံစေ့တစ်စေ့ကို ရှာတွေ့ပါတယ်။
ကြက်မက သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ “ဟေး….ဘယ်သူက ဒီဂျုံစေ့ကို စိုက်ပျိုးချင်သလဲ”“ဘယ်သူမှ မစိုက်ပျိုးချင်ဘူး…” လို့ ဘဲက ဖြေလိုက်ပါတယ်။“ငါကောပဲ…” လို့ ကြောင်က ငြင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။ “ငါ့ကိုလည်း ထည့်မတွက်နဲ့…” လို့ ခွေးက လှည့်ပြောပြန်ပါတယ်။“ကောင်းပြီလေ…အဲဒါဆိုရင် ငါပဲ ဒီဂျုံစေ့ကို စိုက်ထားလိုက်တော့မယ်” လို့ ကြက်မက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကြက်မက ထိုဂျုံစေ့ကို သေချာစိုက်ပျိုးပြီး သေချာရေလောင်းပေးပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ ဂျုံစေ့က အပင်လေးတွေပေါက်လာပါတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဂျုံပင်တွေက ဝါညိုရောင်သန်းတဲ့ဂျုံတွေ ပေါက်ရောက်ရှင်သန်လာတာပေါ့။ အဲဒီ့အခါ ကြက်မက မေးပြန်တယ်။“ကဲ…ဒီဂျုံတွေကို ဘယ်သူက ရိတ်သိမ်းချင်သလဲ”“ငါတော့မပါ…” ဘဲက ပျင်းရိနေတဲ့အသံကြီးနဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်။
“ငါလည်းမပါဘူး…” ကြောင်က ပခုံးတွန့်ရင်းဖြေလိုက်ပြန်တယ်။“ငါ့ကိုထည့်မတွက်ကြနဲ့…” လို့ ခွေးက ငြင်းလိုက်ပြန်တယ်။“ကောင်းပြီလေ…အဲလိုဆိုရင်တော့ ငါ့ဟာငါပဲ ရိတ် သိမ်းလိုက်တာပေါ့…” လို့ ကြက်မက ပြောလိုက်ပြီး တစ်နေ့လုံး ဂျုံတွေရိတ်သိမ်းရတာနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာပေါ့။
ညနေစောင်းတဲ့အခါမှာတော့ ကြက်မမှာ ဂျုံတွေအိတ်ကြီးနဲ့ နှစ်အိတ်တောင် ရလေရဲ့။“ဟယ်လို….အားလုံးပဲ၊ ဂျုံတွေကို ငါနဲ့အတူ ဘယ်သူက ကြိတ်ပေးမလဲ” လို့ ကြက်မက သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို မေးပြန်တယ်။ အားလုံးက ငြင်းကြပြန်တယ်။“အဲဒါဆိုလည်း ငါ့ဟာငါ့ပဲ ဂျုံတွေကြိတ်တာပေါ့ ။ ဂျုံမှုန့်တွေရလာတဲ့အခါ ငါ့ဟာငါပဲ ပေါင်မုန့်ဖုတ်တော့မယ်” လို့ ကြက်မက အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ကြက်မက အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်၀တဲ့ပေါင်မုန့်တွေ ဖုတ်လေတော့တယ်။“ ကဲ…ဘယ်လိုလဲ…ဒီပေါင်မုန့်တွေ ဘယ်သူများ စားချင်ကြမလဲ” လို့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို မေးလိုက်ပြန်တယ်။ အဲဒီ့အခါမှာတော့ ဘဲက ထဖြေပါတယ်။ “ ငါ စားမယ်ဟေ့…..”“ငါလည်း စားမယ်…” လို့ ကြောင်က သွားရည်တွေသပ်ရင်းဖြေပြန်တယ်။ “အရသာရှိမယ့်ပုံပဲ…အနံလေးက မွှေးနေတာပဲ” လို့ ခွေးက ပြောပြန်တယ်။
“နင်တို့ ဘယ်သူမှ စားဖို့ မစဉ်းစားနဲ့….။ ငါပဲ ဂျုံတွေကို ရိတ်သိမ်းပြီး ကြိတ်လာရတယ်။ အိမ်မှာပေါင်မုန့်ဖုတ်လာရတာ။ ငါနဲ့ ငါ့ကလေးတွေပဲ ဒီပေါင်မုန့်ကို စားခွင့်ရှိတယ်” လို့ ကြက်မက ပြောလိုက်ပြီး သူမနဲ့ သူမရဲ့ကြက်ကလေးတွေက ပေါင်ုမန့်ကို မြိန်ရေရှက်ရေ စားလိုက်ပါသတဲ့။
သင်ခန်းစာ။ ဒီပုံပြင်လေးကတော့ အနာမခံ အသာမစံရ ဆိုတဲ့စာသားလိုပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ဘာမှ မကြိုးစားချင်ရင် ဘာကိုမှ ခံစားခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံပြင်ထဲက ကြက်မလို ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရင် ကိုယ်တိုင်ခံစားခွင့်ရှိမယ်ဆိုတာ သားသားမီးမီးတို့ကို နားလည်အောင်ပြောပြပေးလိုက်ပါနော်။
ဘဝမှာ ဒီလိုလူ (၁၀) မျိုးကို တွေ့ခဲ့ရင် တန်ဖိုးထားပါ
( ၁ ) ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူကို တွေ့ခဲ့ရင်သူနဲ့ ဘ၀တစ်လျှေက်လုံး လက်တွဲသွားဖို့အခွင့်အရေး ရအောင်ကြိုးစားပါ ။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့” သူ ထွက်သွားတဲ့အခါအရာအားလုံး နောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ် ။
( ၂ ) ကိုယ်တစ်ကယ်ယုံကြည်ရတဲ့သူ ငယ်ချင်းကို တွေ့ခဲ့ရင်သူနဲ့အဆင်ပြေပြေကောင်းကောင်း မွန်မွန် ဆက်ဆံသွားပါ ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့”ဘ၀မှာသူ ငယ်ချင်း အစစ်တွေ့ရဖို့ဆိုတာ မလွယ်တော့လို့ပါ
( ၃ ) ကိုယ့်ကို တစ်ချိန်တုန်းကကူညီပေးခဲ့ဖူးတဲ့သူကိုတွေ့ခဲ့ရင်သူ့ကို ကောင်း ကောင်းကျေးဇူးတင်ပါ ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့” သူဟာကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်ခဲ့လို့ပါဘဲ ။
( ၄ ) ကိုယ် တစ်ချိန်တုန်းကချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူကိုတွေ့ခဲ့ရင်သူ့ကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကျေး ဇူးတင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့”သူက ကိုယ့်ကိုအချစ်အကြောင်း ပိုနားလည်စေခဲ့လို့ပါ ။
( ၅ ) ကိုယ့်ကို တစ်ချိန်တုန်းကမုန်းတီးခဲ့ဖူးတဲ့သူကိုတွေ့ခဲ့ရင်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ သူ့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့”သူ့ကြောင့်ကိုယ်က ပိုပြီး သတ္တိ ရှိလာခဲ့တယ် ။
( ၆ ) ကိုယ့်ကို တစ်ချိန်တုန်းကသစ္စာ ဖောက်ခဲ့ဖူးတဲ့သူကိုတွေ့ခဲ့ရင်သူနဲ့ အေး အေး ဆေးဆေး စကားစမြည်ပြောလိုက် ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့”သူ့ကြောင့်မ ဟုတ်ရင်ကိုယ်လည်းလောကအ ကြောင်းကိုသိလာမှာ မဟုတ်ဘူး
( ၇ ) ကိုယ် တစ်ချိန်တုန်းကတိတ်တခိုးချစ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ သူကို တွေ့ခဲ့ရင်သူ့ကို ပျော်ရွင်ပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့”ကိုယ်သူ့ကို တိတ်တခိုးချစ်ခဲ့တုန်းကသူပျော်ရွှင်တာကိုပဲ လိုလားခဲ့တာ မဟုတ်လား ။
( ၈ ) ကိုယ့်ဘ၀ထဲကနေ ထွက်သွားခဲ့တဲ့ သူကိုတွေ့ခဲ့ရင်သူကိုယ့်ဘ၀ထဲ ၀င်ခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့” သူက ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ ။
( ၉ ) ကိုယ့်ကိုတစ်ချိန်ကအထင်လွဲခဲ့ဖူးတဲ့ သူကို တွေ့ခဲ့ရင်အချိန်မှီ ဖြေရှင်းချက် ပေးလိုက်ပါ ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့” သူနားလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့အခွင့်အရေးက တစ်ခါဘဲ ရှိနိုင်လို့ပါ ။
( ၁၀ ) ယခု ကိုယ်နဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးလက်တွဲသွားမယ့်သူကို တွေ့ရင်သူ ကိုယ့်ကို ချစ်တာ ရွေးချယ်ခဲ့တာကိုရာနှုန်းပြည့် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော” အခု နှစ်ယောက်လုံးပျော်ရွင်မှု နဲ အချစ်စစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နေရလို့ပါ ။
Credit – k.t.m( စာပေချစ်သူများကို အစဉ်လေးစားလျက်)
ကွမ်းယာဆိုင် များအတွက် ထုံး အလွယ် တကူ စပ်နည်းများ
October 22, 2021 by Shwengwe Games
ထုံးစပ်နည်းအလွယ်နည်း။။ကွမ်းယာ ပစ္စည်းဆိုင်မှ အသင့်ဖောက်ထားသော ထုံးဗူး (ရေသန့်ဗူးနှင့်) ထည့်ထားသော ထုံးဗူး သိုမဟုတ် အထုတ်ကိုဝယ်ပါ။
အုန်းနို့(စတိုးဆိုင်မှာ အသင့်သုံးရှိ) မိမိကုန်လောက်မည့်ပမာဏကိုချိန်ပြီး ထုံး ၅ကျပ်သားကိုထမင်းစားဇွန်းဖြင့်အုန်းနို့ တစ်ဇွန်းနှုန်းထည့်ပါ။
ဆားကိုလည်း ကျိတ်ချေပြီးထုံး၅ကျပ်သားကို ဆားအမှုံ့ လဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းထည့်ပြီး အဝကျယ်သောအိုးခွက်ထဲထည့်ပြီး စုတ်တန်ဖြင့် နှံ့အောင်နာနာမွှေပြီးစပ်ပါ တအားပြစ်နေလျင်ရေကျက်အေးထည့်ပါ။(ရေစိမ်း လုံးဝ မထည့်ပါနဲ့) မနက်မိုးလင်းရောကပါက ရေများသွားလျင်အရေကြည်ကို ခပ်ထုတ်ပြီး မိမိရောင်းမည့် ထုံးအိုးထဲသို့
ထည့်ပြီးကွမ်းယာရောင်းလို့ရပါပြီ။ကွမ်းကစားကောင်းပြီး ထုံံ းပေါက်ခြင်း စပ်ခြင်းလုံးဝ မဖြစ်ပါ(ညကတည်းက စပ်ထားရမည် ) မှတ်ချက်ပျားရည် ဆေးသကြာ သံပုရာသီး လုံးဝမထည့်ပါနဲ့ ထုံးချိုသွာလျင်အချို့က မကြိုက်ပါ
ထုံး ၃ပိဿာ၊ဆား ၅၀-သား၊ ကျောက်ချဉ် ၁၀-သား ပထမအဆင့် ထုံးကို အင်တုံကြီးထဲတွင် ရေအနည်းငယ်ထည့်၍ ခြေပါ။ကျောက်ချဉ် ၁၀-သားကို အမှုန့်ပြုပြီးထည့်ပါ။ နှံ့အောင်မွှေပါအထက်အောက် နှံ့ပါက ဆား၅၀-သားကိုထည့်လိုက်ပါ နှံ့အောင်မွှေပါ။ဒုတိယအဆင့် ရေနွေးဆူပြီးသားကို ထုံးကျောက်ချဉ် ဆား ထည့်ပြီးသားထဲကို လောင်းထည့်ပြီးမွှေပါ။
ရေထည့်ပြီး ဖုံးအုပ်ပါ။၅-ရက်ခန့်ကြာသော် ထုံးအိုးထဲမှ အရည်ကြည်များကို သွန်ပါ။ရေအသစ်ကိုထည့်ပြီး တစ်ညအိပ် စိမ်ပါ၊မနက်လင်းရင် အပေါ်ရေကြည်ကိုသွန်။ မြေအိုးမှာထည့်ပြီး ပွက်အောင်ကျိုပါ၊မီးအနေတော်လောက် ဆူပွက်ထုံး
ထုံးစပ်နည်းအလွယ်နည်း။။ ကွမ်းယာ ပစ္စည်းဆိုင်မှ အသင့်ဖောက်ထားသောထုံးဗူး (ရေသန့်ဗူးနှင့်) ထည့်ထားသော ထုံးဗူး သိုမဟုတ်အထုတ်ကိုဝယ်ပါ။
အုန်းနို့(စတိုးဆိုင်မှာ အသင့်သုံးရှိ) မိမိကုန်လောက်မည့်ပမာဏကိုချိန်ပြီး ထုံး ၅ကျပ်သားကို ထမင်းစားဇွန်းဖြင့်အုန်းနို့ တစ်ဇွန်းနှုန်းထည့်ပါ။
ဟင်းချိုမှုံ့ကို အမှုံဖြသ်သည်ထိ ကျိတ်ပြီး ထုံံး၅ကျပ်သားကို လဖက်စားဇွန်း ဇွန်း ်ဝက်မရှိတရှိ /မန်းကျည်စေ့ခန့်ထည့်ပါ ဆားကိုလည်း ကျိတ်ချေပြီးထုံး၅ကျပ်သားကို ဆားအမှုံ့ လဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းထည့်ပြီး အဝကျယ်သော အိုး
ခွက်ထဲထည့်ပြီး စုတ်တန်ဖြင့် နှံ့အောင် နာနာမွှေပြီးစပ်ပါ တအားပြစ်နေလျင် ရေကျက်အေးထည့်ပါ။(ရေစိမ်း လုံးဝ မထည့်ပါနဲ့) မနက်မိုးလင်းရောကပါက ရေများသွားလျင် အရေကြည်ကို ခပ်ထုတ်ပြီး မိမိရောင်းမည့် ထုံးအိုးထဲသို့
ထည့်ပြီးကွမ်းယာရောင်းလို့ရပါပြီ။ကွမ်းက စားကောင်းပြီး ထုံးပေါက်ခြင်း စပ်ခြင်း လုံးဝ မဖြစ်ပါ (ညကတည်းက စပ်ထားရမည် ) မှတ်ချက် ပျားရည် ဆေးသကြာ သံပုရာသီး လုံးဝမထည့်ပါနဲ့ ထုံးချိုသွာလျင် အချို့က မကြိုက်ပါ
ထုံး ၃ပိဿာ၊ဆား ၅၀-သား၊ ကျောက်ချဉ် ၁၀-သား ပထမအဆင့် ထုံးကို အင်တုံကြီးထဲတွင် ရေအနည်းငယ်ထည့်၍ ခြေပါ။ကျောက်ချဉ် ၁၀-သားကို အမှုန့်ပြုပြီးထည့်ပါ။ နှံ့အောင်မွှေပါ အထက်အောက် နှံ့ပါက ဆား၅၀-သားကို
ထည့်လိုက်ပါ နှံ့အောင်မွှေပါ။ဒုတိယအဆင့် ရေနွေးဆူပြီးသားကို ထုံး ကျောက်ချဉ် ဆား ထည့်ပြီးသားထဲကို လောင်းထည့်ပြီးမွှေပါ။
ရေထည့်ပြီး ဖုံးအုပ်ပါ။၅-ရက်ခန့်ကြာသော် ထုံးအိုးထဲမှ အရည်ကြည်များကို သွန်ပါ။ရေအသစ်ကိုထည့်ပြီး တစ်ညအိပ် စိမ်ပါ၊မနက်လင်းရင် အပေါ်ရေကြည်ကိုသွန်။ မြေအိုးမှာထည့်ပြီး ပွက်အောင်ကျိုပါ၊မီးအနေတော်လောက် ဆူပွက်လဲလှယ်ပေးရမည်။
တစ်ချို့သော ထုံးအိုးများမှာ နှစ်နှင့်ချီကြာအောင်ပင် ရေစိမ်ထားကြရသည်။ထို့ကြောင့် ထုံးစပ်ခြင်း၊ထုံးပေါက်ခြင်း အာနိ သင်များ လျော့သွားခြင်းဖြစ်သည်။ထုံးအိုးများမှ ထုံးကိုတစ်နေ့စာ ရောင်ကုန်မည့်အချိုးအစားကိုကြည့်၍ အသုံးပြု
ရန် ယူရမည်။ကြေးအိုး(သို့မဟုတ်)မြေအိုး စသည်တို့တွင် ထည့်ပြီး တစ်ညလုံးရေစိမ်ထားရမည်။
နံနက်ဘက်တွင် ရေကြည်များကို သွန်ပြီး ရေအသစ်ထည့်၍ နွားနို့နှင့် သမအောင် ရောမွှေကာအသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ထုံးမှာဆွဲတိုင်း လိုက်ပြီး စားသုံးသူများမှာ အာပေါက်ခြင်း မရှိတော့ချေ။ သို့သော် နိုးရောစပ်ထားသော ထုံးမှာတစ်နေ့သုံးဖြစ်သဖြင့် မကုန်လျှင် သွန်ပစ်ပြီး အိုးကိုသန့်ရှင်းအောင် စင်ကြယ်စွာဆေးကြောထားရမည်။
ရန်ကုန် မြို့အတွက် ထုံး စပ်နည်း ပါ
အောင်ထုံးဘူး၊သဇင်ကျော်ထုံးဘူးတခြားဘယ် ready made ထုံး ဘူးမဆို ရပါတယ် ✍အသုံးပြုပုံ ထုံး တစ်ဘူးဝယ်ပါ✍ထုံး ဘူးကို သမအောင် လှုပ်ပေးပါ✍ပြီးရင် ပေါင်းအိုး (သို့) ဒန်အိုးထဲ ထည့်ပါ✍အိုးပွက်လာသည်အထိ ကျိုပါ✍
အိုးဆူလာရင်၊သကြား ထမင်းစား ၄ဇွန်း ဆား လဘက်စား ၁ဇွန်း၊ထောပတ် လဘက်စား ၁ဇွန်းထည့်ပြီး နှံ့အောင်မွှေပေးပါ✍၁၅မိနစ် ခန့်ကျိုပြီး အိုးကို အအေးခံထားပါ ✍အေးရင် ထုံး ကကျို ထားလို့ ပျစ်နေလိမ့်မယ်✍ထုံး အပျစ်အကျဲကို ချိန်ဆ ပြီး ရေနွေးရောပါ ✍ပြီး ရင် ရေစစ်နဲ့ ၂ထပ်စစ်ပြီးတစ်ည သိပ်ထားပါ ✍မနက်ကျ ဆိုင်မှာ စတင် ရောင်းချနိုင်ပါပြီကွမ်းရွက်ကိုညောင်တုန်းကွမ်းရွက် သုံးပေးပါ အားလုံး အဆင်ပြေ ကြပါစေ
ကျောက်စိမ်း စစ်မစစ် ခွဲခြားနည်းများ
ကျောက်တုံးကိုလေထဲသို့လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးလေးလံနေလားသိရန်သင်၏ လက် ဖဝါး၌ဖမ်းပါ။ ကျောက်စိမ်းအစစ်သည်အလွန်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ သင်ထင်သည်ထက်ပိုလေးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
၎င်း၏အလေးချိန်ကိုခံစားရန်ကျောက်တုံးကိုလှန်ပြီးဖမ်းပါ။သင်ဖြစ်နိုင်လျှင် ၎င်းကိုအခြားကျောက်တုံးတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကျောက်စိမ်း၏အလေးချိန်မည်မျှရှိသည်ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုရနိုင်သည်။ဤစမ်းသပ်မှုသည်မတိကျသော်လည်းကျောက်စိမ် း၏စစ်မှန်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၂ အေးမြသည်ကိုခံစားရန်ကြည့်ရန်သင်၏မျက်နှာတစ်ဖက်သို့ကျောက်ကိုထိပါ။ကျောက်စိမ်းသည်သဘာဝအားဖြင့်အလွန်အေးသောကျောက်ဖြစ်သော ကြောင့်၎င်းကိုထိမိလျှင်အေးသွားလိမ့် မည်။ သင်၏အသားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်၍အေးသည်ကိုကြည့်ရန်သင်၏ မျက်နှာသို့မဟုတ်လည်ပင်းကိုကိုင်ထားပါ။ မဟုတ်ရင်အဲဒါအတုဖြစ်နိုင်တယ်။ မင်းကျောက်ခဲကိုမင်းမျက်နှာနဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ဆုပ်ကိုင်ထားရင်အဲဒါကိုမပူပါနဲ့။ မင်းရဲ့အသားပေါ်မှာကျောက်တုံးကိုပွတ်တိုက်ရင်တောင်အအေးဒဏ်ကိုခံစားသင့်တယ်။
၃ အေးနေသလားကြည့်ရန်သင်၏လက်ရှိကျောက်ကိုပူနွေးအောင်ကြိုးစားပါ။ ကျောက်ခဲကိုသင်၏လက်ဖဝါး၌တင်ပါ၊ ထို့နောက်သင်၏လက်ကိုပတ်ထားပါ။ ၎င်းကိုအပူပေးရန်ကြိုးစားပြီးကျောက်ကိုတင်းကျပ်စွာညှစ်ပါ။ ၁-၂ မိနစ်စောင့်ပါ၊ ထို့နောက်အေးနေသေးလျှင်ကျောက်ကိုကြည့်ပါ။ ကျောက်စိမ်းအစစ်အမှန်သည်ပူအိုက်နေချိန်တွင်ခံစားရကောင်းခံစားရသင့်သည်။ကျောက်အတုသည်အေးနေသေးသည်ဟုခံစားရသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့်ဒီစမ်းသပ်မှုကမင်းကျောက်အစစ်အမှန်တွေကိုအတုတွေခွဲထုတ်ဖို့ကူညီနိုင်တယ်။
ကျွမ်းကျင်အကြံပြုချက် JERRY EHRENWALD သမ္မတ၊ နိုင်ငံ တကာ Gemological Institute & ဘွဲ့ရ Gemologist ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူကသဘောတူသည် – ကျောက်၏ အပူချိန်သည်၎င်းသည်ကျောက်စိမ်းအစစ်ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကျောက်တုံးကမင်းဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုမင်းလက်ထဲမှာကိုင်ထားပါ။ တကယ့်ကျောက်စိမ်းကနွေးဖို့နည်းနည်းကြာတယ်။ မင်းရဲ့ကျောက်တုံးကအတော်လေးမြန်မြန်အပူပေးပြီးမင်းလက်ထဲမှာအေးမနေဘူးဆိုရင်အဲဒါကအတုဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
၄ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကျောက်စိမ်းကျောက်တုံးကိုအစစ်အမှန်ကျောက်စိမ်းနှင့်ထိပါ။ ၎င်းသည်ကျောက်စိမ်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်သောကျောက်၏သိပ်သည်းဆကိုအကဲဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကျောက်တုံးများကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာလက် ခုပ်တီးပြီးသူတို့၏အသံကိုနားထောင်ပါ။ကျောက်စိမ်းသည်မာကြောသောကြောင့်ကျောက်ခဲများတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတိုက်မိသောအခါနက်ရှိုင်းသောပဲ့တင်ထပ်သောအသံကိုကြားသင့်သည်။ ကျောက်များ သည်ပလတ်စတစ်ပုတီးကဲ့သို့အသံထွက်လျှင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကျောက်စိမ်းသည်အတုဖြစ်နိုင်သည်။မင်းမှာ ကျောက်စိမ်းအစစ်အမှန်မရှိဘူးဆိုရင်မင်းတခြားကျောက်တုံးနဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။သို့သော်၎င်းသည်ကျောက်စိမ်းအစစ်အမှန်ကိုသုံးသည့်အခါ၌ အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကိုသတိပြုပါ။
၅ သင်၏လက်သည်းခွံ (သို့) သတ္တုအ ပိုင်းအစဖြင့်ကုတ်ခြစ်စမ်းသပ်ပါ။ ရိုးရှင်းသောကုတ်ခြစ်စမ်းသပ်ရန်၊ သင်၏လက် သည်းခွံကိုသင်ကုတ်ခြစ်နိုင်သလားဆိုသည်ကိုကြည့်ရန်သင်၏ လက်သည်းခွံကိုပွတ်ပေးပါ။အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနှင့်မထင်ရှားသောနေရာ၌ ကျောက်၏မျက်နှာပြင်ကိုကုတ်ရန်ကတ် ကြေးတစ်စုံ (သို့) ဓားကိုသုံးပါ။ကျောက် ခဲခြစ်မိလျှင်၎င်းသည်အစစ်အမှန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ကျောက်စိမ်းအစစ်သည်ခဲယဉ်းသောကျောက်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည်အလွယ်တကူမခြစ်နိုင်ပါ။ကျောက် စိမ်း ဝါသနာရှင်မိဘညီကိုမောင်နှမအားလုံးအောင်ကျောက်ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။
သတိထားသင့်တဲ့ ရန်ကုန် – နေပြည်‌တော် – မန္တလေးအမြန်လမ်း ( သို့ မဟုတ်) ၃၆၆ မို င် ၃ ဖာလုံ အကြောင်း
မိတ် ဆွေတွေအတွက် သိနေပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တနှစ်တစ်ခေါက်လောက် ရုံးပိတ်ရက်သွားမဲ့ မိတ်ဆွေတွေ မသိတဲ့ နေရာလေးတွေရှိခဲ့ရင် အသုံးဝင်ခဲ့ရင် ကျနော် လက်ညောင်းရကျိုးနပ်ပါပြီ။
ဒီမိုင်တိုင် ( ၃၆၆/ ၃ မိုင် )အတွင်းမှာနေရာတွေ အများကြီးပါဒီထဲက ကျနော် မှတ်သားထားတာလေးတွေ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆီအောက်မှာ ရှယ်ပေးချင်ပါတယ်။
အမြန်လမ်းမှာ အရေးအကြီးဆုံးပါကိုယ့်အရှိန်ကို မထိန်းနိုင်ပဲ အိပ်မငိုက်ပဲနဲ့ မှောက်တာ အကွေ့တွေမှာပါ
•၁၀၅ မိုင်( ရွှေလီဦး ၁ရယောက်သေ)
•၁၉၇ (ရာဇာမင်း ၉ယောက်သေ)
•၂၄၂ အကွေ့အကြမ်းဆုံး သတိပြုရမဲ့အကွေ့
မန်းလေးဘက်သွားတဲ့ဘက်မှာတော့ •၃၅၆ •၃၅၉ အကွေ့အရမ်းကြမ်းပါတယ်။
၂။ဂငယ်ကွေ့…အမြန်မောင်းနေတဲ့ လမ်းမှာ ရှေ့ကားဂငယ်ကွေ့ရင် အရမ်းသတိထားရပါတယ်
•၁၅မိုင်ဘရားကြီးအနီး ဘုရားဖူးကားတွေ ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ ဂငယ်ပြန်ကွေ့ကြတယ်
၁၁၀-၁၄၇ ကြားမှာ ကျွဲအုပ် နွားအုပ်တွေ ဖြတ်သန်းသွားလာပါတယ်။သတိထားပါ ။တိုက်မိရင် ပိုင်ရှင်စုံစမ်းမရပါ။
ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျေးရွာရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ အဓိကဖြတ်သန်းပါတယ် ။
၁၃မိုင် – မ်ိုင်တိုင် ၂ဝကြား
၁၄ရမိုင်- မိုင်တိုင် ၁၅၃ကြား (တောင် ငူ-ကေတုမနီ)
၂၅၆မိုင် – မိုင်တိုင် ၂၆၂ကြား ( ပျော်ဘွယ်လမ်းခွဲ)
၅။ကီလိုမီတာဖမ်း (ရဲစခန်းနဲ့ အနီးဆုံးနေရာများ)
လမ်းဘေးမှာ Light truck ကားလေးရပ်ထားရင်သတိထားပါ သတိထားကြည့်ရင် နောက်ဖုံးမှာ Highway Police စာတန်းလေးပါပါတယ်။
(ဒီစာပိုဒ်က စည်းကမ်းမဲ့မို့အတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ တခါတလေ အရေးကြီးလို့ အမြန်မောင်းမိရင်ဒီနေရာတွေကို သတိမထားလို့ ရဲဖမ်းခံရရင် ပိုကြာတတ်လို့ပါ)
PS. ကျနော့် ၂၅၀၀၀၀ ဖိုး အတွေ့အကြုံပါ….
၆။ နယ်မြေကြမ်း…..မြေနေရာ မသန့်ဘူးပဲ ပြောရမလား….အတိုက်အခိုက်အများဆုံးနဲ့ ယာဉ်မောင်း အိပ်အငိုက်ဆုံးနေရာတွေပါ
•မိုင် ၂၀ ပတ်လည်
•မိုင်တိုင် ၂၈၅-၃၃၀ ကြား
•၂၈၅-၃၃ဝကြား ညနက်ပိုင်းတစ်ယောက်ထဲ မိတ္တီလာကထွက်လာရင် သတိထားမိတယ် အဲဒီမိုင်တိုင်တွေမှာ ကျောချမ်းလာတယ်။
အကျဉ်းဖျင်း ၈မိုင်ခြားတစ်ခုအမြန်လမ်းရဲကတော့ တစ်ကယ်ချီးကျုးဖို့ကောင်းပါတယ် ။
နေပူကျဲထဲမှာ ညနက်သန်းခေါင်မှာ ကားဘီးပေါက်တာကားပျက်တာကအစ ကူညီပေးပါတယ်။
ရဲစခန်းလိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ပို့တစ်ခုရှိပါတယ် လင့်ရှာပေးပါ့မယ်။
ခရီးဝေးသွားမယ်ဆို တာယာ မနှမျောပါနဲ့…အင်ဂျင်ဝိုင် ၊ရေတိုင်ဂီရေ ၊ ကားကြံခိုင်ရေး သေချာပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
၁၁။ တံတားဦး လေဆိပ်အဝိုင်း
မန်းလေး တိုးဂိတ်ကျော် အရှိန်အရမ်းတင်ပြီး ညပိုင်းဆို သတိထားပါ ….ရှေ့အလယ်တည့်တည့်မှာ မီးမရှိတဲ့အဝိုင်းကြီး စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
•အချက်ပြမီး ရှေ့မီးကြီး ဖွင့်ထားပါ။
•ကီလိုမီတာ ( ၆၀) ထက် ပိုမောင်းလို့ မကောင်းပါ။
ကားကြံခိုင်ရေး စစ်ဆေးချိန် မရရင် ညပိုင်းသွားခြင်း ရှောင်ကြည်ပါ။
အမြန်လမ်း အသုံးပြုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဘေးကင်းနိုင်ကြပါစေ။
နောက်ထပ် သတိမှုစရာလေးများကျန်ခဲ့လျှင် ဖြည့်စွက်ရေးသားကြပါ။ ဒီစာကိုရေးသားနိုင်တာဟာကျနော်တစ်ဦးထဲအ တွေ့အကြုံမဟုတ်ပါ။
ယာဉ်မောင်းသက် ၁၅နှစ်ကျော် ရှိတဲ့ ယာဉ်မောင်းမိတ်ဆွေကြီး တွေ ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ပါ။
လိုအပ်တဲ့ နေရာ နဲ့ သတိပြုရန် အချက်များလည်း ထပ်ပြီးဖော်ပြရေးသားပေးခြင်းဖြင့် ခရီးသွား နှင့် ခရီးဖော် ဘဝတူယာဉ်မောင်းများအား ကူညီပေး ကြပါခင်ဗျ
yaw Swar Win (mmlivenews.com)